Talo ku socota Musdafe Cali Oomaar (Cantar Kidaar-cune)W/Q: Khadar Aar.
Saturday June 02, 2018 - 10:58:24 in by Samiir Cabdi
Talo ku socota Musdafe Cali Oomaar (Cantar Kidaar-cune)W/Q: Khadar Aar. Waxa aan halkan ka salamayaa saxiibkayga qaliga ah ,aqoonyahan Musdafe Cali Oomaar(Cantar Kidaar-cune) kaasi oo ah nin igu qaali ah.
Hadaba saxiibkay Musdafe ayaa waxa uu dhawaan soo duubay muuqaal uu kaga hadlaayo dagalada iyo dirirta indhawaalaba kasoo cusboonaatay deegaamada gobolka Sool ee Somaliland gaar ahaan degsiimada Tuke-raq;halkaasi oo ay dhowr goor ku dagalameen ciidamada Dawlada Somaliland iyo maamul goboleedka Somaliyeed ee Pntiland.
Saxiibkay Musdafe aniga oo dhagaystay duubistiisa ayaa waxa kaliya ee isoo jiitay isla markaana ugu dhaliyey in uu saxiibkay fariintan isaga iyo dadkuba ay iga gudoomaan ,sida badheedhka ah ee uu saxiibkayga qaaliga ahi tariikhda uga ilduufaayo,kadib markii uu yidhi ""Somaliland dhulkan ay ku dagalamayso ee Tuka-raq iyo wixii la halmaala kuma saxsana ,sababta oo ah ayuu yidhi ;Labadii maamul ama dawladeed ee Somaliland Ingiriis iyo SomaliKonfur Italyaano waxa sharciyadoodii ay burburtay markii uu Siyaad barre talada la wareegay;taasoo uu uga jeedo waxa aynu isku raacnay in aynu hal dawlad wada dhisano markii xoog laynagu wada qabsaday!!!!!
Saxiibkay Musdafe maaha mid aan ka warhayn tariikhda Somaliland iyo heerarka kala gadisan ee ay soo martay, balse saxiibkay waxbuu diidan yahay taasina waxa ay dhaxal siisay in uu gabi ahaanba dafiro xuduudiisi uu isagu iska lahaa,waana arin indhawalahanba aan ku arkay aqoonyahan badan oo Somaliland u dhashay,iyada oo la odhan karo malaha waxbaa ku kalifay.
Musdafe saxiib Tariikhda aan ku saxo:
Wixii ka horeeyay dawladii Cabdirashiid Cali Sharmaarke Somaliland iyo Somaliitaaliya waxa ay kala ahayeen laba maamul oo aan si sharciya isugu biirin,waxbadan oo heshiiskooda ahina ay qabyo ka yihiin.
Balse xiligii Cabdirashiid ayaa somaliland iyo Somaliitaaliya ugu horeeyey heshiis awood qaybsi oo kaliya ,hada maaha heshiis laba dhinac oo ku salaysan habraaci lagu yaqaanay laba maamul ama laba dawladood oo danwadaag dawladeed ku heshiiya.
Taasi lafteedu may noqon mid si fiican u midha dhalisa,waxaan ka badnayn 3 biloodna waxaaba qori caaradii ku qabsaday dhulkii Taliskii Maxamed Siyaad,waana mida dhalisay kala shakiga iyo is aamin la'aanta Somali kala dhex gashay.
Saxiib Musdafe qabsashada Siyaad barre hadii aad u fahamtay heshiis laba dhinac iyo isfaham Xalaal ah,waxa ay ilatahay in aanay sax ahayn isla markaana loo baahan yahay in aad tariikhda nin kaaga fiicani ma jiree in aad wax badan saxdo.
Musdafe saxiib hadii maanta aynu labadeenu Dukaan wada furano isla markaana heshiis awood qaybsi ah aynu wada yeelano,ayaamo ka bacdina labadeenaba niman Tuugii ay boobaan heshiis keenii iyo dhamaan maalkeeni,ma waxa aynu odhanaynaa heshiiskii aynu wada galnay ayay wanajiyeen oo mid sharciya ayay ka dhigayaan,misse waxa aynu u arkaynaa in ay yihiin niman ina boobay oo goor ay noqotaba waxaaynu Ul-booca ugu kutubaynaa inta aynu xaqeena soo dhacsanayno.
Nimankii Somali koonfureed boobkii Maxamad Siyaad iyaga midha dhal ayuu u noqday kadib markii quruskeenii uu ugu daray dadkii uu deegaanka la lahaa,inaguna aynu **Daymo-luudnay** samir badana aynu dugsanay,Ilahayna xaqeenii gacanta inaga soo galiyey.
Dhacii iyo bookii Afwayne inagu sameeyey 1969 Koonfur xanuun kumuu keenin balse inaga waynu ku dulmanayn.
​Hadaba saxiib waxa aad ka mid ahayd madaxdii Xisbiga Wadani,waxa kaliya oo aad u halgamaysayna waxa ay ahayd in Xisbigaagu dalka qabsado,kadibna aad horumar iyo horukac aad dalka gaadhsiisaan adiga iyo saaxibadaa,waanad ku saxnaydeen,balse ilama aha,una malaynmaayo,kaamanay suura gasheen adiga iyo xisbigaba in aad sidan u hadasho hadii aad dalka taladiisa qabsan lahaydeen reer Wadani.
Hadaba halkee ayay wax ka xun yihiin ayaan iswaydiiyey,kadibna nin ayaa isla iminka i siiyey jawaab runtii ishaafiday waxaanu igu yidhi markii aan waydiiyey ma dhagaysatay aqoonyahan musdafe siduu u hadlay ,waxa hadalkisii ka mid ahaa ""Waar Khadar aad baan ku salaamayaa indr..Ninyow mabaan dhagaysan reer Waddanina way dayaysanyihiin Oo wax ka soo qaad maleh warkooguye "" kaftan iga dheh.
Musdafe saxiib aniga laftaydu kaala mid ayaan ahay in dhiiga Muslimka xaqdaro lagu daadiyo, lakiin garta iyo gardarada u qaybinmaayo labada dhinac,cid ayaa soo duushay oo dirirta soo qaaday ilaa hadana u doonyeysan.
Anigu saxiibkayga qaaliga ah kuma tuhmaayo in uu Xamaraysan yahay,inkastoo ay tahay fikir iyo rabitaan oo qofku xaq uleeyahay in uu tageero hadii ay la noqoto Midnimada indha-beelka ah oo aanu hore u tijaabinay soona aragnay halka uu biya dhaceedu yahay aniga khadar ahaan.
Musdafe Kidaar cuno waa dhalintii iyo aqoonyahankii Hargaysa,maaha runtii in aan ku tuhmaayo in ay ku jirto siyaasada sida laadhuuda loo cayaaro,balse waa nin waxbadan la socda aan filaayo in uu waxbadana dib ka sixi doono,saxiin noolow niyad jabkana iska ilaali Wadanina ha guulaysto.